Azonao atao izao ny misintona Modern Combat 3: Fallen Nation | Vaovao IPhone
Azonao atao izao ny misintona Modern Combat 3: Firenena nianjera
Androany ny FPS napetraka amin'ny ady maoderina tsy misy isalasalana. Battlefield 3 dia tonga amin'ny sehatra PC, XBOX 360 ary PS3 ary amin'ny sehatra iOS, Modern Combat 3: Fallen Nation dia miseho.
Araka ny efa fantatry ny maro aminareo, ny lalao dia novolavolain'i Gameloft tamim-pitandremana fatratra fa iray amin'ireo lalao nahombiazan'izy ireo indrindra izany. Amin'ny sary sy amin'ny sehatry ny feo, Modern Combat dia manolotra traikefa tena tsara toy ny lalao vitsivitsy amin'ny App Store.
Amin'ny ambaratonga azo lalaovina, ny lohateny dia manana mode mpilalao tokana ahitana misiôna 13 izay hilalaovanay amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Raha multiplayer ny antsika, Modern Combat 3 koa dia manome ny fahafaha-milalao an-tserasera miaraka amin'ny olona 12 amin'ny sarintany manokana 6 ary miaraka amin'ny maody 7 samy hafa.
Modern Combat 3: Fallen Nation dia fampiharana izay azonao atao amin'ny finday amin'ny iOS fitaovana rehetra, mitentina 5,49 euro ary azonao atao ny misintona azy amin'ny fipihana ity rohy manaraka ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Azonao atao izao ny misintona Modern Combat 3: Firenena nianjera
Brothers In Arms 2: Global Front misintona maimaim-poana